DLULA Mitsubishi F-2A / B FSX & P3D - Rikoooo
IMitsubishi F-2A / B FSX & P3D
Usayizi 83.1 MB
Play 7 289
Umbhali: Ithimba leFS KBT, u-Hiroaki Kubota
I-Mitsubishi F-2 ku-version A ne-B ene-cockpit yangempela, iphethe iphakethe elenziwe iqembu elidumile laseJapan FS KBT. Kufakwe ukuhluka kwe-30, i-parachute, izikhali nokubukwa okuningi kwekhamera nemifanekiso.
I-Mitsubishi F-2 iyinhlangano ye-fighter multirole evela ku-General Dynamics F-16 elwa ne-Falcon, futhi eyenziwe yi-Mitsubishi Heavy Industries ne-Lockheed Martin ye-Japan Air Self-Defense Force, ehlukaniswe nge-60 / 40 ekukhiqizeni phakathi kweJapane ne-Japan I-united states. Ukukhiqiza kuqalile ku-1996 futhi indiza yokuqala yangena ku-2000. Indiza yokuqala ye-76 ingenele ku-2008, enezingqikithi zama-airframes ze-94 ezikhiqizwayo. I-radar ye-AAA yokuqala esebenzayo esebenzisa i-aircraft yi-J / APG-1 eyethulwa kwi-Mitsubishi F-2 ku-1995 (i-Wikipedia)
Nazi ezinye izincazelo eziwusizo
I-Atlas Cheetah C FSX & P3D